Maqal: Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo soo dhaweeyay Doorashadii Madaxweyne Madoobe. – SBC
Maqal: Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo soo dhaweeyay Doorashadii Madaxweyne Madoobe.
Posted by Webmaster on May 16, 2013 Comments
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen C/Samad Cali Shire oo Saxaafada Maanta kula hadlayay xarunta Madaxtooyada Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa soo dhaweeyay Doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo oo ka tirsan Gobolada Maamulka Jubaland ee lagu doortay Madaxweyne Cusub.
Waxa uu Madaxweyne ku xigeen Gen C/samad Cali Shire u hambalyeeyay Madaxweynaha cusub ee ku soo baxay Doorashadii Jubaland Axmed Maxamed SHeekh Islaam oo looyaqaan Axmed Madoobe iyo Ku xigeenkiisa Gen Fartaag.
General C.samad Cali Shire waxa uu sheegay in Puntland Markii horeba ay Taageero Buuxda u heysay Shirkii lagu doortay madaxweyne Axmed Madoobe, ayna taageereyso Madaxweynaha loo doortay Jubaland, aadna ugu bogaadinayaan .
Waxaa kale oo uu Madaxweyne ku xigeenka Puntland ku tilmaamay sidii wacneyd ee ay wax u dheceen mid ay xaq u lahaayeen dadka deegaanada gobolada Jubaland, maadaama ay ahaayeen dad uu istaagay in ay Masiirkooda ka talilyaan.
Dhageyso:-DAAR AMA SHID
Tala soo jeedin waxa uu ugu jeediyay Dowlada Federaalka Soomaaliya ee uu madaxda ka yahay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in ay soo dhaweyso Maamulka Cusub ee yeeshay madaxweynaha Cusub, u fidisana Gacan.
Sikastaba ha ahaatee gelinkii dambe ee shalay markii ay soo baxday Natiijada saxda ah ee lagu dhawaaqay in uu yahay madaxweyne Axmed Madoobe ayaa markiiba waxaa Shir saxaafadeed ku qabtay Aqalka Madaxtooyada Garoowe Madaxweynaha Puntland isagoona noqday Masuulkii ugu horeeyay ee Hambalyadiisa saxaafada u mariya Madaxweyne Madoobe.